Umxholo ongena mva: Isango lakho lokuKhokela kwi-B2B elungileyo! | Martech Zone
Umxholo onamasango sisicwangciso esisetyenziswa ziinkampani ezininzi ze-B2B ukunika umxholo olungileyo kunye nentsingiselo yokufumana isikhokelo esihle kutshintshiselwano. Umxholo wesango awunakufikelelwa ngokuthe ngqo kwaye umntu unokufumana emva kokutshintshiselana ngolwazi olubalulekileyo.
I-80% yee-asethi zentengiso zeB2B zibiyelwe; njengoko umxholo onamasango ubuchule kwiinkampani zokuvelisa eziphambili ze-B2B.
Kubalulekile ukwazi ukubaluleka komxholo onamasango ukuba uyishishini le-B2B kwaye iasethi ekumgangatho ophezulu ngokuqinisekileyo ifanelwe ngaphezulu kokukhankanywa. Kungoko nantsi inqaku elinikezelwe kule asethi yexabiso elinokuthi libe nefuthe kumgangatho we isizukulwana esikhokelayo kwiinkampani zeB2B.
Umxholo wesango lwayo nayiphi na into engenayo simahla; yenziwa ifumaneke ngokuchaseneyo nokutshintshiselana ngolwazi. Esona sizathu sokufihla umxholo kukuvelisa izikhokelo. Xa umsebenzisi eza kwiwebhusayithi kwaye sele eza kukhuphela iasethi; iya kucela undwendwe ukuba igcwalise ifom. Le fomu ilulwazi olubalulekileyo kwintengiso ukuze ibambe phambili. Isikhokelo esizimisele ngokwaneleyo ukukhuphela i-asethi sisenokuba sisikhokelo esihle.
Ke Nazi izibonelelo eziqhelekileyo zomxholo onesango:
Yandisa amathuba akho okubamba izikhokelo ezilungileyo
Ukuphucula ukuthengisa okuveliswe kukukhokela
Yazisa umthengi wakho ngcono ngokukunika ithuba lokuba ube nokuqonda okungcono malunga nomthengi
Umxholo wesango ujonge ukukunika ukubamba okungcono kunye nolawulo ngakumbi ngokwazi abathengi bakho okanye ukwazi ngakumbi malunga neendwendwe zakho. Umxholo onomda nawo unendawo engathandekiyo kuwo njengokufumana izibonelelo ezincinci ze-SEO, ukubanakho ukuqhuba ithemba lakho kude newebhusayithi yakho, kungabonakali uphawu lomsebenzisi kumsebenzisi onokubanceda ukuba baqonde ukuba ungubani, okanye ukubonwa kwephepha elincinci okanye Ukuphela kwezithuthi
Umxholo onamasango kufuneka usetyenziswe ngononophelo xa unezinye iindlela ezikhoyo kwaye usenokubeka emngciphekweni wokuphulukana neendwendwe. Nangona kunjalo, kunokuba luncedo ekufumaneni ukhokelo olulungileyo, kuba umntu ofuna ngokwenene ukwazi malunga negama okanye ufuna umxholo, kwaye ufuna ezinye iinkonzo unokutshintshisa ulwazi nawe.
Ke yeyiphi imizekelo yomxholo onesango onokuthi uhambise kwiwebhusayithi yakho ngethemba lokufumana isikhokelo esihle?
Nanku ukujonga ngokukhawuleza kwezinye zeefom zezona zinto zibalaseleyo zomxholo onesango:
Ebooks - Ithandwa kakhulu phakathi kweendwendwe; Incwadi ye-e sisikhokelo esinokukunika ulwazi oluchanekileyo malunga nobungcali kwimiba ethile yesifundo. Inokuba kwifom yesikhokelo esifutshane esinokukunceda ekwakheni ukwazisa ngebrand kunye negunya lophawu; ukuyenza ibe sisomlo esomeleleyo ukuba yenye yeefom zezona zinto zibalaseleyo zomxholo ongena gati.
Whitepapers - Olunye uhlobo lwesiqulatho esithandwayo- Amaphepha agciniweyo yeyona fomu ibalaseleyo yomxholo onamasango. Ngumxholo wobuchwephesha ngokwawo kwaye unokunika olona lwazi luqinisekileyo malunga nasiphi na isihloko ekubhalwe ngaso. Ii-Whitepapers ziyaziwa njengoko ziyimithombo ethembekileyo yomxholo kwaye zinokunceda ukumisela njengenkokeli yokucinga. Umxholo onomda unokuba ngumthombo omkhulu wesikhokelo esihle njengoko unokwenza abantu abaninzi bakuthembe kwaye bafuna ukukhuphela ulwazi lwakho lwe-whitepaper.
iWebinar -I-webinar ngomnye umzekelo womxholo olungileyo onamasango. Kukuthatha okuhle kubakhenkethi abakulungeleyo ukuthatha inxaxheba kunye nokunxibelelana nawe. Ezi ntlobo zemisebenzi zinceda ukwakha ukuthembana kunye nobudlelwane bexesha elide. Unokuzondla ezi zikhokelo banomdla okanye ababhalisela i-webinar. Olu luhlobo lomxholo onesango elinokutsala izikhokelo ezilungileyo nazo.
Umxholo wokubonelela ubaluleke kakhulu kuhambo lwabathengi. Kubalulekile ukuba ubenesiqulatho esivaliweyo esifanelekileyo senziwe ukuba sifumaneke kwithemba lakho lokwakha ubudlelwane kunye nenkqubo yokondla.
tags: Ukuthengisa kwe-b2bzasemoyeniUmxholo onesangoisizukulwana esikhokelayoBhalisowebinarwhitepapers
UMadhavi ngumbhali woMxholo wokuYila uneminyaka engama-8 + yamava kushishino lwe-B2B. Njengombhali onamava womxholo, injongo yakhe kukongeza ixabiso kumashishini ngokusebenzisa izakhono zokubhala ezizodwa. Ujonge ukuseka ibhulorho yolwimi phakathi kwetekhnoloji kunye nehlabathi leshishini nothando lwakhe ngegama elibhaliweyo. Ngaphandle kokubhala umxholo, uyakuthanda ukupeyinta nokupheka!